Smadav Pro 10.6
ကိုထွေး(နည်းပညာ) No comments
သင့်ကွန်ပျူတာအတွက် Virus ရန်ကင်းဝေးချင်ရင်တော့ ဒီAntivirusလေးဆောင်ထားစေချင်ပါတယ်။
လူသုံးအများဆုံးလို့ဆိုရမယ့်Antivirusလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Full Versionဖြစ်အောင်ကီးထည့်ပေးထား ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့သူငယ်ချင်းများအောက်မှာဒေါင်းသွားလိုက်ပါ။
Smadav 10.6 serial key crack isafull version pc Antivirus software for your pc. itsacompletely solution for your infected pc or Secure pc. Itsagive you smart security and protect agonies all kinds of on-line virus and off lien virus also. itsacomplete solution for your pc malware, social media spamming virus,online hacking, ip hacking and many more Melodious activity. Isacompletely protect your pc When you browse internet and login your online secure ID password, bank information and many more. Itsasupper fast and secure software and 24 hours give you best security agonist all kinds of virus and hacking attempt.
Perhaps Smadav isaIndonesian software but now popular in over world and most probability5million+ active install. my friend use Smadav last6month and still happy with that antivitus software. He told me itsavery smooth, secure and find all kinds of virus activity. SmadAV 10.6 never slowing your pc or performance that’s why you can easily use this on your pc and do all works easy and faster.
SmadAV 10.6 whats the best features on this antivirus software:
Itsavery simple and easy to use antivirus.
You can use it on your pc and laptop.
best Online and offline security.
best online protection agonist hacking and Spamming.
Spamming mail security and best email security.
Automatic update it online and give you best and best security.
Support all kinds of operating system.
More secure and best software to protect your pc.
Enjoy with best Antivirus software.
Acer Aspire V5-471G Drivers
ကိုထွေး(နည်းပညာ)2comments
Acer Aspire V5-471G Drivers လေးပါ။ Windows7အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ 32 bit အတွက်ရော 64bit
Version : 9.3.0.1020
Operating System (OS) : Microsoft Windows732_64bit
Version : 6.0.1.6577
File Size : 183.9 MB
Version : 8.15.10.2712
File Size : 112.9 MB
Operating System (OS) : Microsoft Windows732bit
Operating System (OS) : Microsoft Windows764bit Download
Version : 8.17.12.9616
File Size : 188.4 MB
NVIDIA Graphics Driver (PhysX)
Version : 9.11.1111
Version : 11.0.0.1032
Version : 8.0.0.1262
Version : 10.6.9.8
Version : 16.0.2.0
File Size : 101.7 MB
Version : 1.0.4.220
Version : 6.1.7601.27015
Version : 7.4.0000.0126
File Size : 114.2 MB
Version : 6.5.1.2501
File Size : 234.2 MB
Version : 7.054.0309.2012
Version : 10.0.0.42
Version : 5.100.196.18
ယုယုလှိုင်: အကိုရှင့် window xp sp3original + Key ရှိရင်တင်ပေးပါဦး။
ဟုတ်ကဲ့ပါ..ညီမလေးယုယုလှိုင်ရေ..။ ပြန်ဖြေတာ နည်းနည်းနောက်ကျသွားပါတယ်။ ညီမလေးရဲ့ Windows XP (SP3) က Professional လား Home Edition လား မသိလို့ Professional တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်မပြေရင်လည်းပြန်ပြောခဲ့ပါ။
Windows XP SP3 Professional Service Pack3CD Key
CD Key:  MR49R – DRJXX – M6PX2 – V96BF – 8CKBJ
GalaxSim Unlock v2.6
ဒီကောင်လေးကတော့ Samsung Phone ကို ကိုင်ဆောင်းထားသော ဘော်ဒါတွေအတွက် အရမ်းအသုံး
ဝင်းတဲ့ apkလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါစို့ ဘော်ဒါတစ်ယောက် နိုင်ငံခြားက
ဆွေမျိုးက Samsung Phone S3 ကိုလက်ဆောင်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီဖုန်းက ဒီနိုင်ငံမှာ သုံးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Sim lock ဖြစ်နေတာပေါ့ ဆိုင်တွေမှာ သွားပြင်ရင်လည်း အနည်းဆုံးကတော့ ၃သောင်းလောက်ပေးရပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့တစ်ပြားမှ ပေးစရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မိမိဖုန်းထဲမှာ Root ရှိထားဖို့လို့ပါတယ်။Sim lockကို Support ပေးတဲ့ Model တွေကတော့
Canon PIXMA MX416 Printer MP drivers
yaykhe: printer MX416 ဆောဖ်ဝဲလ်တင်ပေးပါလား။
iPhone6(4.7 inches) နှင့် iPhone6Plus (5.5 inches)
Phone6နှင့် iPhone6Plus ကြေညာပြီ
iPhone6နဲ့ iPhone6Plus ဆိုပြီးတော့ Apple မှ တရားဝင် ကြေညာလိုက်ပါပြီ။
ချယ်ရီနွေဦး-တောင်ကြီးသားများ (2014 Ablum)
ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးသားများစုပြီးထွက်ရှိလာတဲ့“ချယ်ရီနွေဦး”ဆိုတဲ့အခွေလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်ပုဒ်ချင်းပဲတင်ထားပေးပါတယ်။ကြိုက်နှစ်သက်ရာသီချင်းကိုရွေးချယ်ဒေါင်းနိုင်အောင်လို့ပါ။ လိုချင်တဲ့သီးချင်းပေါ်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒေါင်းလုပ်လင့်တစ်ခါတည်းကျလာမှာပါ။
Dawn: English စာအသံထွက်တဲ့ Software ရှာနေတာမတွေ့လို့ပါ...ကိုထွေး ကူညီပါဦး.....။
English စာသားတွေကို အသံထွက်ပေးမယ့် Software ပါ။ အထက်ကညီးလေးတောင်းထားတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ညီလေးကြိုက်တဲ့ English
Samsung ဖုန်းတွေကို အတုအစစ်ခွဲကြည့်ရအောင်
ပထမဦးဆုံး *#0011# ကိုဖုန်းခေါ်တဲ့နေရာကနေရိုက်ခေါ်လိုက်ပါ
Lenovo IdeaPad Z510 drivers for Windows 7
အောင်ဇော်: lenovo corei7 z 510 Driver လေးရှိ၇င်တင်ပေးပါ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကိုအောင်ဇော်ခင်ဗျာ။ အစ်ကိုက ဘာဝင်းဒိုးတင်ထားတယ်။ ပြီးတော့ (32 bit,64 bit) ဘယ်ဟာတင်ထားတယ်ဆိုတာမပြောတော့ Windows7အတွက်ပဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ (32 bit) ရော (64 bit) အတွက်ရောနှစ်ခုလုံးတင်ထားပေးပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ။
Blue Screen Error Software
16 Mar 14, 08:54 PM
moethet: blue screen error ဖြေရှင်းနည်းမှာပေးထားတဲ့ဒေါင်းလုပ်လင့်ကသေနေလို့ လင့်အသစ်လေးပေးပါလို့တောင်းဆိုပါရစေ........။
ဟုတ်ကဲ့ပါ...komoethet။ ဒီတစ်ခါ Software လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Software နဲ့အတူ PDFဖိုင်လေးပါတွဲပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေနော်..........။
moethet: blue screen error ဖြေရှင်းနည်းမှာပေးထားတဲ့ဒေါင်းလုပ်လင့်ကသေနေလို့ လင့်အသစ်လေးပေးပါလို့တောင်းဆိုပါရစေ။
ဒီနည်းကတော့ Blue screen ဖြေရှင်းနည်းတွေထဲက နောက်တစ်နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Blue screen တက်တက်လာလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်မယ်ထင်လို့ပါ။ Software နောက်တင်ပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာ။
Shadowrun Dragonfall-RELOADED (1.16GB)
Shadowrun Dragonfall-RELOADEDဂိမ်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့နဲနဲကြီးပါတယ်။ (၆)ပိုင်းခွဲပြီးတင်ထားပါတယ်။ ဂိမ်းဝါသနာပါတဲ့သူငယ်ချင်းများကတော့ဒေါင်းပြီးဆော့လို့ရပါတယ်။